Mayelana – 2fish
Home / Mayelana
2fish.co inkampani lamadoda kanye nabesifazane, kuhlanganise nabapristi ambalwa Catholic, anikezelwe ekuvikeleni nasekumiseni echaza inkolo yobuKatolika–ikakhulukazi enkolweni yamaRoma Katolika–ngokusebenzisa isizathu neqiniso.
Zonke wamukelekile ukuhlola indawo yethu futhi ufunde umyalezo kaNkulunkulu nekuhumusha yethu. Wena futhi wamukelekile ukuba athumele imibuzo yethu “Buza umPristi” page noma ukuhambisa intandokazi Entshumayelweni. Siyoposa izimpendulo futhi wamukele okuqukethwe ngokushesha ngangokunokwenzeka, kodwa thina bayinhlangano sokuzithandela, futhi ilungu ngalinye (okungenani) one umsebenzi wesikhathi esigcwele.
Ngezinga ongakwenza ngalo, isigijimi sethu ukwamukela yamasonto, ngaphandle uvukela zezinkolelo central ubuKatolika. Kukhona ukufana okukhona ngaphezu umehluko phakathi amahlelo ahlukahlukene Christian, futhi ngenkathi sigubha labo letifanako, sizokwenza ukuthi kungani sikholelwa kulokho esikwenzayo futhi umkhuba njengoba senza.
Sithemba ukuba sikwenze konke ecacile, English elula.
Sikhetha igama “2fish” ngenxa incazelo kabili.
Okokuqala, like the Miracle we (ezimbili) Fish and (ezinhlanu) Izinkwa ukuthi livela ngamunye emaVangelini amane, sifuna kuthinta abantu abaningi ngangokunokwenzeka ngayo imithombo embalwa kakhulu. Ngakho, like Springsteen lihlabelela, “Sihlale countin’ on a isimangaliso.”
Second, ngokusebenzisa informal yethu (ngangokunokwenzeka), emihle, esibandakanya (futhi, ngethemba, idolo) Umlayezo, esethemba ukubamba izinhlanzi ezimbalwa, too. Xhumana nathi Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe.